Home » Serivisy fampandrenesana tariby » Rama Sivaraman dia miditra amin'ny MENTIS, Inc. ho talen'ny fitantanana
NEW YORK, NY, Etazonia, 29 Janoary 2021 /EINPresswire.com/ - MENTIS, Inc. dia nanambara ny fanendrena an'i Rama Sivaraman ho talen'ny fitantanana ho an'ny India nanomboka ny 05 Janoary 2021. Amin'ny maha mpikambana ao amin'ny ekipa fitantanana manerantany, Andriamatoa Sivaraman dia samy tompon'andraikitra amin'ny famoahana ireo lafiny asa ho an'ny faritra India. ary koa amin'ny fandraisana anjara amin'ny drafitra sy fanatanterahana ny paikadim-bokatra ao anatin'ny drafitra manerantany MENTIS.
"Faly izahay mandray an'i Rama amin'ny fianakavianay," hoy Rajesh Parthasarathy, mpanorina sy tale jeneralin'ny MENTIS, Inc. Izy dia nanampy tamin'ny famolavolana ny paikadim-pitomboana sy ny drafitra fampandrosoana ny vokatra. MENTIS dia miomana eo amin'ny hantsan'ny fiovana manomboka amin'ny fanombohana bootstrap mankany amin'ny fikambanana fiarovana vaovao matotra miaraka amin'ny fanolorana vokatra goavambe. Mino aho fa i Rama miaraka amin'ny zavatra niainany no ho mpanentana tonga lafatra hanampy antsika amin'izany tetezamita izany. ”
Talohan'izay, Ramatoa Sivaraman dia niasa ho toy ny Chief Operating Officer, Directeur Executive ary mpikambana ao amin'ny Board of Polaris Consulting Services Ltd, izay nitantanany andraikitra maro samihafa toy ny Human Resources, Delivery Assurance, ary Business Finance. Voasokajy ho iray amin'ireo mpitarika 20 vehivavy ambony ao IT ao India tamin'ny volana aogositra 2014 izy ary nahazo ny loka Women Leadership for Excellence ao amin'ny IT Sector any Singapore, naorin'ny CMO Asia tamin'ny 2016.
Tamin'ny fotoana nanendrena azy, Ramatoa Sivaraman dia nanambara hoe: “Efa ho roapolo taona izao, niara-niasa tamin'ny fikambanana IT an'ny banky lehibe manerantany aho. Isan-taona ny fandaniana teti-bola tsy maintsy atao amin'ny fikirakirana ny tetikasa fanarahan-dalàna dia lehibe, miaraka amin'ny fanovana mifandraika amin'ny fiarovana ny angona izay ampahany lehibe amin'ity fandaniana ity. Matetika izahay dia mahita ilay kaody / tahiry mitovy amin'ny fiovana amin'ny lalàna efa misy. Rehefa namolavola ny fahaizany amin'ity faritra ity nandritra ny taona maro dia hitako fa malefaka be ny vokatra MENTIS ary mifantoka amin'ny fanomezana vahaolana mifanaraka amin'ireo fanovana farany nataon'ny lalàna manerana ny firenena. Faly aho fa mahita ny fomba ahafahan'ny ekipa MENTIS manohana ireo orinasa amin'ity dia ity amin'ny fomba haingana kokoa, mailaka ary mora alefa. ”
Mikasika ny MENTIS:
Niorina tamin'ny 2004, MENTIS, Inc. dia iray amin'ireo orinasa voalohany tamin'ny tsenan'ny fiarovana ny angon-drakitra vaovao. Notarihan'ny mpanorina fahitana iray izay manana fototra iorenan'ny asa aman-draharaha sy ny haitao, dia nanomboka nanao fanavaozana avy hatrany ny MENTIS ary tsy mbola nijanona hatrizay. Fantatra amin'ny fandraisany ny tanjona kendrena hiatrika risika sy fanarahan-dalàna, MENTIS manohy mitondra vokatra matanjaka eny an-tsena, valin'ny fanadihadiana lalina momba ny fironana vaovao atahorana, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifany handinihana sy handanjalanjana ny ankehitriny. fanamby.
Ny MENTIS dia manampy amin'ny fiarovana ny angon-drakitra indostrialy sy andrimpanjakana malaza indrindra eto an-tany. Ny lisitry ny mpanjifa dia misy ny mpisava lalana amin'ny Internet sy ny zotram-pirenena; andrim-pampianarana ambony manomboka amin'ny ligy Ivy ka hatramin'ny sekoly Land Grant; behemoth indostrialy iraisam-pirenena sy goavambe fivarotana; ary ireo mpitarika manerantany amin'ny serivisy ara-bola voarindra sy indostrian'ny fahasalamana.
29 Janoary 2021, 09:45 GMT